एजेन्सी, ५ जेठ । अमेरिकी कमिक्स बुक्सको डिसी कमिक्सद्वारा प्रकाशित एउटा काल्पनिक सुपरहिरो हो सुपरम्यान ।
तर सुपरम्यान एउटा काल्पनिक पात्र मात्र होइन धेरै बालबालिकाहरुका लागि यो एउटा जीवित पात्र नै हो । सुपरम्यान अर्थात् हावामा उड्ने हिरो जो अन्यायको विरुद्ध लड्छ र विश्वलाई विनाशबाट बचाउँछ ।
तर यो सुपरम्यानलाई लिएर एउटा अफवाह फैलिएको थियो । एकताका यो भूमिका निभाउन कोही तयार थिएनन् । किनभने जसले यो भूमिका निभाउँथ्यो । उ या त बर्बाद हुन्थ्यो वा त यो संसारबाट विदा भएर जान्थ्यो ।
सुपरम्यानको कमिक बुकको पात्र मात्र होइन । टिभीको साथै सुपरहिरो मोसन पिक्चरको सुपरम्यान पनि श्रापित मानिनथ्यो ।
जसजसले यो पात्रको भूमिका निर्वाह उनीहरुको जीवनमा केही राम्रो भएन । यहाँबाटै सुरु भयो सुपरम्यान श्रापको कहानी ।
१. कर्क एलेन
सुपरम्यान फिल्मको सुरुवत सन् १९४८ मा भयो । त्यस फिल्ममा कर्क एलेन पहिलो सुपरम्यान हुन् । सुपरम्यान सिरिजको पहिलो फिल्म त निकै लोकप्रिय भयो तर त्यसपछि कर्कलाई कुनै काम मिलेन । निर्देशकहरु उनलाई आम मानिसको भूमिका दिन हिचकिचाउन थाले । उनले आफ्नो आत्मकथामा पनि सुपरम्यानको भूमिकाले आफ्नो जीवनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनले लेखेका छन् ।
२. जर्ज रिब्स
सुपरम्यानको भूमिकालाई लिएर एउटा कहानी प्रचलित छ । भनिन्छ सुपरम्यानको भूमिका निभाउने हरेक कलाकार सधैं घाटामा जाने गरेका थिए । सुपरम्यान श्रापको कारण कुनै पनि अभिनेता यो रोल गर्न चाहँदैन थिए ।
यो भूमिकामा देखिएका अर्का अभिनेता जर्ज रिब्सले आफूलाई नै गोली ठोकी आत्महत्या गरे । उनले यो किन गरे त्यो आज पनि रहस्यको कुरा छ । धेरैले यसलाई सुपरम्यानको भूमिकासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।
३. क्रिस्टोफर रिब्स
जर्ज रिब्सको निधन पछि सुपरम्यान भूमिका हराउन थालेको थियो । तर टिभीको माध्यमबाट यो भूमिका पुनः मानिसहरुसम्म पुग्न थाल्यो । सुपरम्यानको भूमिका निभाउने तेस्रो कलाकार थिए क्रिस्टोफर रिब्स । उनी सुपरम्यानः द मूभिमा आफ्नो भूमिकाका कारण रातारात लोकप्रिय भए ।
तर अचानक घोडाबाट लडेर प्यारालाइज्ड भएका क्रिस्टोफरको २००४ मा निधन भयो । यति मात्र होइन सुपरम्यानको बुवाको भूमिका निभाएका मार्लन ब्रैंडोको वास्तविक जीवन पनि निकै कष्टकर रह्यो ।
४. बैडन रुथ
चौंथो सुपरम्यानको रुपमा भूमिकामा आएका बैंडन रुथको फिल्म घाटाको कारण बन्द भयो । यो फिल्मसँग जोडिएका सयौं मानिसहरुको जीवनमा केही कुरा नराम्रो घट्यो । यसको पछाडी जुनै कारण भए पनि सुपरम्यान श्राप आज सबैको मन मस्तिष्कमा छ । आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै पनि धुम्रपान नगरेकी क्रिस्टोफर रिब्सकी श्रीमतीको दाना रिब्सको निधन २००६ मा फोक्सोको क्यान्सरबाट भयो ।
५. हेनरी कैविल
हाल सुपरम्यानको रोल अभिनेता हेनरी कैविलले गरिरहेका छन् । उनले अहिलेसम्म सुपरम्यानका दुईओटा फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । हेनरी यसअघि मिसन इम्पोसिबलमा पनि काम गरिसकेका छन् ।